Abaabul Dagaal oo xoogan oo ka jira Gobalada Baay, Bakool iyo Gedo iyo Ciidankii Bohol-bashii oo u soo Ruqaansaday dhinaca Baay. | Radio Borama
You are here : Radio Borama » NEWS » Abaabul Dagaal oo xoogan oo ka jira Gobalada Baay, Bakool iyo Gedo iyo Ciidankii Bohol-bashii oo u soo Ruqaansaday dhinaca Baay.
Abaabul Dagaal oo xoogan oo ka jira Gobalada Baay, Bakool iyo Gedo iyo Ciidankii Bohol-bashii oo u soo Ruqaansaday dhinaca Baay.
Posted by admin on February 20th, 2012 01:09 AM | NEWS
Mudisho(Subulahanews)Saacadihii u dambeeyey ayaa Deegaano ka tirsan Gobalada Baay, Bakool iyo Gedo laga dareemaya Abaabul dagaal oo ay wadaa dhinacyada halkaasi isku hayaee Xarakada Al-shabaab iyo ciidanka dowlada oo garab ka helaya kuwa Ethiopia.
Saraakiisha dowlada ee dagaalka Gobaladaasi hogaaminaya ayaa ku han jabay in saacadaha soo socda ay kala wareegi doonaan kooxda Al-qaacidada ku biirtay ee Al-shabaab iyadoo dadka Deegaanadaasi ay soo wajahday cabsidii ugu darneyd.
Jamaal Xassan Sanay oo ka mid ah saraakiish Dowlada ee ku sugan Gobalka Gedo ayaa Jubba waxaa uu u sheegay in talaabo cusub ay qaadayaan saacadaha soo socda Deegaano horlehna ay la waregi doonaan Abaabulkoodana si toos ah u bilowday uuna yahay kii ugu dambeeyey.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale cadeeyey in Ciidankii ku sugnaa Deegaanka Bohol-bashiir ay u soo dhaqaaqeen dhinaca Deeganka Yur-kud oo ah Deegaan kala qeybiya Gobalada Baay iyo Gedo.
Al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay lagala wareegayey Deegaano ay ka talin jireen ayaan inta badan ka hadleynin dagaalada ay ku galaan Gobalada Koonfuta Soomaaliya halka Saraakiisha dowlada kuwa dagaalada hogaaminaya ay ku waramaan in maalin walba ay guulo ka gaarayaa Deegaano horlehna ay qabsanayaan.
Deeganada inta badan Xiisaduhu ay ka jiraan waxaa ka mid ah Deegaano ka tirsan Degmooyinka Buur-dhuubo, Luuq, Berdaale Waajid iyo Deegaano kale oo Gobaladaasi ka tirsan kuwaasi oo dadka ku dhaqan xiligan ay soo wajahday cabsidii ugu xooga badneyd sanado ka dib.
« BEESHA DHEXE OO GACANTEEDA KU BURBURISAY SOMALILAND!!! by Jamac Dahir Waberi
Liiska weftigii SL. ee loo xulay shirka London ee ku sugan Itoobiya xubnaha dhoofay iyo kuwa Hungoobay »